Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Axad Ah 5 June
HomeWararka CiyaarahaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Axad Ah 5 June
June 5, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Manchester United ayaa rajeyneysa inay beeca xorta ah ku soo jiidato kubadsameeyaha Danmark Christian Eriksen iyadoo 30 jirkaan uu soo gabagabeynayo heshiiska waqtiga gaaban ee Brentford .Sunday Mirror
United ayaa sidoo kale kalsooni ku qabta saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona Frenkie de Jong, oo 25 jir ah. Daily Star Sunday
Arsenal ayaa diyaar u ah inay u soo bandhigto weeraryahanka Manchester City iyo Brazil Gabriel Jesus, oo 25 jir ah, mushahar toddobaadle ah oo dhan 190,000 si uu ugu soo dhaqaaqo Emirates Stadium xagaagan. Sunday Mirror
Barcelona ayaa u sheegtay weeraryahanka Liverpool iyo xulka Masar Mohamed Salah, oo 29 jir ah, inuu ku biiri karo xagaaga soo aadan. Sunday Mirror
Liverpool ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro garabka Leeds iyo Brazil Raphinha, oo 25 jir ah, ka dib markii uu sii kordhay inuu iska casilo lumitaanka weeraryahan Senegalese Sadio Mane, 30. Sunday Mirror
Mane ayaa ku adkeysanaya inuu doonayo inuu ka tago, iyadoo weeraryahanka lala xiriirinayo Bayern Munich , isagoo aan weydiisan qandaraas cusub oo uu ku joogo Anfield. Sunday Telegraph
Chelsea ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro weeraryahanka Barcelona iyo France Ousmane Dembele, oo 25 jir ah, kaasoo beeca xorta ah lagu heli karo marka uu qandaraaskiisu dhaco dhamaadka bishaan. Talksport
Tababaraha kooxda Roma ee Jose Mourinho ayaa u muuqday mid la xifaaltamaya Zinedine Zidane si uu u badalo Mauricio Pochettino oo ah tababaraha kooxda Paris St-Germain.Mail
Nottingham Forest ayaa diyaar u ah inay nasiibkooda tijaabiyaan aduun dhan 12 milyan ginni si ay u helaan goolhayaha reer England ee Burnley Nick Pope, oo 30 jir ah, kaasoo lagu qiimeeyo 40 milyan ginni. Sunday on Sunday
Tottenham, Newcastle iyo Aston Villa ayaa dhamaantood xiiseynaya inay 28 jirka reer Belgium Yannick Carrasco ka soo qaataan Atletico Madrid. Fichajes – Isbaanish
Tottenham ayaa sidoo kale xiiso u qabta 25 jirka weerarka uga ciyaara Newcastle ee Alan Saint-Maximin. Football London
Newcastle ayaa u baahan doonta inay bixiso 50 milyan ginni si ay ula soo wareegto daafaca reer Holland ee Manchester City Nathan Ake, oo 27 jir ah. Sun on Sunday
Crystal Palace ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rangers iyo Nigeria Joe Aribo, oo 25 jir ah.
Wolves ayaa ku dhow inay 30 milyan ginni kula soo wareegto daafaca dhexe ee reer Portugal ee kooxda Sporting Lisbon Goncalo Inacio, 20. Mirror Online
Wolves ayaa sidoo kale lala xiriirinayay weeraryahanka Benfica iyo Switzerland Haris Seferovic ka dib markii tababare Bruno Lage lagu sawiray isagoo la kulmaya 30 jirka. Semih Atlilar on Twitter